Meizu M2, यसको निमन्त्रणा मा नोकिया को लागी एक इशारा Androidsis
ठिक छ, यस्तो देखिन्छ कि हो, मेजु र नोकिया टेलिफोनी बजारमा साझेदार हुनेछन्
केहि मिनेट पहिले हामी एक धेरै रोचक समाचार गूंजिएको छ: Meizu नोकिया को टेलीफोनी बजार मा अर्को सहयोगी हुन सक्छ। Weibo मा निर्माता द्वारा बनाईएको प्रकाशनहरु यस प्रसिद्ध को धेरै प्रयोगकर्ताहरु लाई आशा दिएको थियो ब्रान्ड कि हामी Noki को फिर्ता को लागी तत्पर छौंa.
ठूलो आशा पोस्टर संगै आयो कि Meizu प्रकाशित गरीएको थियो १११० नम्बर देखाउँदै, स्पष्ट रूप मा सबैभन्दा धेरै बिकने नोकिया मोडेल नम्बर (दुनिया भर मा २५० मिलियन भन्दा बढी इकाईहरु) लाई जनाउँदै। ठिक छ, यदि हामी खातामा लिन्छौं कि को प्रस्तुति घोषणा गर्न को लागी Meizu M2 अर्ध-कार्यात्मक नोकिया १११० फोन को एक श्रृंखला पठाइएको छयो स्पष्ट छ कि नोकिया र Meizu केहि गर्न को लागी छन्। र हामी यो मनपर्छ, पक्का को लागी।
Meizu एक अर्ध-कार्यात्मक नोकिया १११० Meizu M1110 लाई बढावा दिन पठाउँछ
चाल मात्र कुशल भएको छ: निर्माता एक विशेष कार्यात्मक Nokia1110 फोन यात्रा गर्न विशेष प्रेस आमन्त्रित गरीएको छ, बजार मा सबै भन्दा राम्रो ज्ञात टर्मिनलहरु को एक र जो यसको कम मूल्य र प्रतिरोध को लागी बाहिर खडा भयो।
तपाइँ यसको साथ के हासिल गर्नुभयो? खैर, एक हात मा, एक प्रभावशाली र फरक पदोन्नति, केहि छ कि क्षेत्र एक धेरै मनपर्छ। अर्कोतर्फ, बुझ्न दिनुहोस् कि Meizu M2 यो क्षेत्र मा एक अघि र पछि चिन्ह लगाउन सक्छ, यद्यपि यो नोकिया ११११० द्वारा कटाई बिक्री हासिल गर्न लगभग असम्भव छ।
निस्सन्देह, नोकिया १११० एक पूर्ण कार्यात्मक टर्मिनल छैन। एक धेरै समान डिजाइन भएको बावजूद र चालू गर्न सकिन्छ, मात्र एक चीज हो कि तपाइँको स्क्रिन मा देखिन्छ Meizu M2 आधिकारिक प्रस्तुति मिति: जुलाई 29।
र हामी एशियाई विशाल बाट यो नयाँ फोन को बारे मा के थाहा छ? ठीक छ, आधिकारिक रूपमा केहि छैन, तर को सबै जानकारी लीक पछि TENNA डाटाबेस(चिनियाँ प्रमाणीकरण एजेन्सी), हामी यसको प्राविधिक विशेषताहरु को अधिकांश पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ।
यस तरीकाले यो आशा गरिन्छ कि Meizu M2 एक ५ इन्च स्क्रिन छ कि १,२5० पिक्सेल 720२० को संकल्पमा पुग्नेछ। एक मेडियाटेक 6735३३५ प्रोसेसर 64४ बिट, आठ कोर वास्तुकला हुड अन्तर्गत, एक शक्तिशाली माली- T720 GPU र २ जीबी रैम संगै अपेक्षित छ।
यसको १ GB जीबी आन्तरिक भण्डारण पर्याप्त लाग्दैन, तर यसको माइक्रो एसडी कार्ड स्लट को लागी धन्यवाद तपाइँ यो समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यसको १३ मेगापिक्सेलको मुख्य क्यामेरा बिर्सन सक्दैनौं, सायद सोनीबाट, ५ मेगापिक्सेलको अगाडिको क्यामेरा भएकोमा। के तपाइँ अरु चाहानुहुन्छ? खैर, Meizu M16 13G LTE समर्थन, एक दोहोरो सिम कार्ड र एक5mAh ब्याट्री हुनेछ। र यसको मूल्य? अफवाहहरु यो सुझाव दिन्छन् यो ५ y युआन, परिवर्तन गर्न १०० यूरो भन्दा कम खर्च हुनेछ।
र यदि यो मूल्य साँचो हो, भले ही यो जस्तै नष्ट गर्दैन नोकिया १११०, यो स्पष्ट छ कि Meizu बजार मा हिट गर्न को लागी जाँदैछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » Meizu » ठिक छ, यस्तो देखिन्छ कि हो, मेजु र नोकिया टेलिफोनी बजारमा साझेदार हुनेछन्
यदि यो संग उनीहरु राम्रो मूल्यहरु प्राप्त र भौतिक स्टोरहरु मा फोन ल्याउन, महान
कि उनीहरु डिजाइन नवीकरण, चीजहरु हो कि स्मार्टफोन को दुनिया मा हराइरहेको छ को एक हो कि उनीहरु डिजाइन नवीनता
Meizu नोकिया को नयाँ पार्टनर हुनेछ?